Dr.ဖေသက်ခင်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်နည်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Dr.ဖေသက်ခင်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်နည်း…
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Jan 24, 2012 in Copy/Paste, Myanma News, News | 21 comments
ဧရာဝတီဘလောဒ့်မှ ရရှိပါသည်။အခုပဲဖတ်လိုက်ရလို့ ရွာသူားတွေကို ရှယ်လိုက်တာပါ။
ဒေါက်တာကြီးတို့ကတော့ ကမ္ဘာကျော်တော့မှာပဲ…ဒေါက်တာကြီးရဲ့ အမူမဲ့အမှတ်မဲ့က တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ နည်းလေးတော့ အားနာသင့်ပါတယ်…ဒေါက်တာကြီးအတွက် စားပွဲခုံကျင်းနေတယ်ထင်ရင်လည်း ဆိုင်းဘုတ်ကိုခုံအောက်ပို့ထားလိုက်ပေါ့နော်…ဒါမှမဟုတ်လဲ အရင်လိုပဲ ချောင်ထိုးထားလိုက်ပေါ့နော်…
စတိုင်လား မြန်မာလို့တင်ရမှာရှက်လို့လား ဂေါက်တာရေ
အော်…မြန်မာကိုမသိကြမှာစိုးလို့ သူများထက်ထူးပြီး ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တာနေမှာပေါ့
ဟဲဟဲ .. ကို ဇော်မင်းရေ .. အဲ့ဒါက … မာယာ .. မာယာ … ဖြစ်မလားပဲ … ။
နာမည်ကြီးချင်လို့ နဲ့ .. ထင်ပေါ်ချင်လို့ .. .. ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ … မြင်သာချင်လို့ …. .
(ဟီး .. လျှောက်ကြောတာနော် .. စိတ်ဆိုးရဘူး … )
ထောင်တက်နေတာမဟုတ်ပါ ထောင်ဆင်းနေတာပါ။ တော်တော် အူကြောင်ကြောင်နိူင်ပါလား ၀န်မင်းရယ်
မြန်မာက ထောင်တော့ ထောင်တယ် ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေလားမသိဘူးနော် ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
တမူထူးခြား မြန်မာများဆိုသလိုပေါ့…. ပိုမြင်သာထင်သာရှိသွားတာပေါ့နော်။
ခေတ်သစ် ဆိုင်းဘုတ် ထောင်နည်းပေါ့နော်
သူ့ ခဗျာ လဲ ဒီရာထူးနဲ့ ဆိုတော့ ။
ပျော်ပါးမော်ကြွား ထောင်ထောင်..ထောင်ထောင် ဖြစ်ရရှာတာပေါ့ ။
မာကတ် တင်းဆင်းတာပါ ကွယ်။ အခုတောင် အ တော်လေး နံမယ် ကြီးသွားပြီမ ဟုတ်လား၊
ဒီလောက် အမြင်မတော်ရင်လဲ နဲနဲတော့ photo ကို shop လိုက်ပါတော့လား ..
ခုတော့ တိုင်းသိ ပြည်သိ ဖြစ်နေပြီ ..
ဒေါက်တာကလဲ ၀န်ကြီးလုပ်နေပြီးတော့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့တော့ မနေသင့် မလုပ်သင့်ပါဘူး …
ဆိုင်းဘုတ်က ဒီအတိုင်ချထားရင် မထင်ပေါ်မှာ စိုးလို့နေမှာပေါ့……..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတော့ သိသွားပြီလေ……. ” မြန်မာ” ဆိုတာကို……….
…..လူဆိုတာ အမှားမကင်းနိုင်ကြဘူးလေဗျာ …..
ကိုရင်ရဲ့ ယတြာ လား
မြန်မာ ကို ကမ္ဘာက သိအောင်လို့
ဂီဂီရဲ့ မားကတ်တင်း နည်းနဲ့လား
ကပေါက်ဖော်လို တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး
မတူတာတွေ လျှောက်ရေးသွားတယ်နော် ….
အဲဒါ သူကြီး ကြောင့်။
သူကလဲ ဂေဇက် ကို ဝင်ဖတ်ပြီး “မတူသော အမြင် တွေးပါ/ ရေးပါ” ဆိုတာတွေ တွေ့ပြီး “မတူသော အမြင် Position နဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ထောင်ထားတာ”။ ;-)
မိန့်ခွန်းပြောသူ ဘယ်သူ ဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရအောင် တမင်လုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုံးစံကိုလိုက်လို့ အပြုအမူများ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအမည်ကို သိပ်အရေးတယူ မလုပ်တဲ့ သဘောဖြစ်မှာပါ။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ နိုင်ငံတော်အလံကို အားကစား ဝတ်စုံအဖြစ် ဝတ်ဆင်ခွင့်၊ မျက်နှာမှာ ဆေးရောင်စုံ ခြယ်သခွင့်များရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ဥပဒေပြဌာန်းပြီး အရေးယူတဲ့ နိုင်ငံများလည်း အများအပြားပါ။။။။
ှဟုတ်တယ် ။ ဦးကြောင် ပြောသလို လို မိန့်ခွန်းပြောသူ အလှည့်မှာ အဲ့ဒီလိုထောင် ပြီး ပြောကြတာတွေ့ဘူးပါတယ် ။ ကိုယ်က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ၀င်မပါဘူးတော့ ဘာ အဓိပ္မါယ်လည်း မသေချာဘဲ ပြောမိတာဖြစ်မှာစိုးလို့ အရင် အစဖော်သူ စောင့်နေတာ .. :grin:
ခုလေးပဲ ဖေသက်ခင်ကို မေးကြည့်ပြီးသွားပါပြီကွယ်။ သူအဲ့ဒီလို့ဒေါင်လိုက် ထားလိုက်ရတာဟာ သူညာဘက် လက်က ၀ဲတွေကို video ရိုက်တဲ့အထဲမပါရလေအောင် ကွယ်လိုက်တာပါတဲ့ခင်ဗျာ။ video ရိုက်တာကလဲ ပုခုံးထမ်းပြီး အပေါ်စီးကနေရိုက်တော့ အကွယ်လေးပိုရသွားအောင်လို့ ဒေါင်လိုက်လေး ထားလိုက်တာပါတဲ့။
ဟုတ်မှာပါကျမ်းမာရေး ၀န်ကြီးလုပ်နေပြီး ၀ဲပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနှော် :-)။ ဆေးရုံ ကဆေးတွေလိမ်းလဲမကောင်းလို့ ရွာကဆရာတော်ဆေးကို လှမ်းမှာထားတယ်ပြောတယ်။
အဲဒါပြောတာပေါ့ ယတြာ တွေဓာတ်တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ဒီမိုကရေစီလုပ်ခိုင်းလို.ကတော့ နတ်တွေသကြားတွေသာ စောင့်မကြည့်ရှူပါနဲ.ပဲပြီးသွားတော့မှာ…
ဒီလောက်ပညာတတ် ဖြစ်နေပြီ သများနိုင်ငံသွား ပြီး သူများထက်ထူး နဖူးအဆွယ်ပေါက် နေတော့ သွားရော….
ပြန်ရောက်ရင် ဆေးရုံတွေကို လုပ်ရဦးမယ်တဲ့ဗျာ…